လိမ္မာပြီးထူးချွန် တဲ့သားသမီးတွေကြောင့် အသက် (၇၁) နှစ်အရွယ်ထိ ကျန်းမာလှပ နုပျိုနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မိခင် – Cele Oscar
လိမ္မာပြီးထူးချွန် တဲ့သားသမီးတွေကြောင့် အသက် (၇၁) နှစ်အရွယ်ထိ ကျန်းမာလှပ နုပျိုနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မိခင်
အိုဇာတာကောင်းဖို့ကိုတော့ လူတိုင်းမျှော်လင့်ကြပေမယ့် လူတိုင်းမကောင်းနိုင်ကြပါဘူး။ နန္ဒာလှိုင်တို့ မောင်နှမတွေဟာ မိခင်အပေါ် မှာသိတတ်ပြီး အမြဲလိုလို မိခင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးစဉ်းစား ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ဒူးရင်းခြံကိုလည်း မောင်နှမတွေ တက်ညီလက်ညီ ကူညီပေးကြတာကြောင့် မိခင်ကြီးဟာ လိမ္မာတဲ့သားသမီးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသူပါ။
ဒီနေ့ဟာ သူမတို့မိခင်ကြီးရဲ့ အသက် (၇၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ဖြစ်ပြီး သားသမီးတွေရဲ့ သိတတ်မှုကြောင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင် တဲ့မိခင်ဘဝကို အချိန်အကြာကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတာတောင် မိခင်ကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့် အပျိုဘဝ တုန်းကနေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးမှာပဲ ကလေးသုံးယောက် ရတဲ့အထိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ နန္ဒာ့ရဲ့ သိတတ်မှုက ပြောမကုန်အောင်ပါပဲ။
ချစ်ရတဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့ကိုလည်း ” Happy birthday! မေမေ သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ် ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ ” ဆိုပြီး ဆုတောင်းစကားလေးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ Happy Birthday ပါ အန်တီရေ သက်ရှည်ကျန်းမာပြီး ဖြစ်ချင် သမျှဆန္ဒတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အိုဇာတာကောငြးဖို့ကိုတော့ လူတိုငြးမွှောလြငြ့ကှပမယြေ့ လူတိုငြးမကောငြးနိုငကြှပါဘူး။ နနျဒာလှိုငတြို့ မောငနြှမတှဟော မိခငအြပြေါ မှာသိတတပြှီး အမှဲလိုလို မိခငစြိတခြမြွးသာဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးစဉြးစား ပေးခဲ့ကှပါတယြ။ မိခငရြဲ့ဒူးရငြးခှံကိုလညြး မောငနြှမတှေ တကညြီလကညြီ ကူညီပေးကှတာကှောငြ့ မိခငကြှီးဟာ လိမျမာတဲ့သားသမီးလေးတှကေို ပိုငဆြိုငထြားရသူပါ။
ဒီနဟေ့ာ သူမတို့မိခငကြှီးရဲ့ အသကြ (၇၁) နှစပြှညြ့မှေးနေ့ ဖှစပြှီး သားသမီးတှရေဲ့ သိတတမြှုကှောငြ့ ကနြွးမာပွောရြှငြ တဲ့မိခငဘြဝကို အခွိနအြကှာကှီးပိုငဆြိုငနြိုငခြဲ့ပါတယြ။ အိမထြောငကြပွှီးတာတောငြ မိခငကြိုမခှဲနိုငတြာကှောငြ့ အပွိုဘဝ တုနြးကနခေဲ့တဲ့ အခနြးလေးမှာပဲ ကလေးသုံးယောကြ ရတဲ့အထိ ပွောပြွောရြှငရြှငနြခေဲ့တဲ့ နနျဒာ့ရဲ့ သိတတမြှုက ပှောမကုနအြောငပြါပဲ။
ခစွရြတဲ့မိခငကြှီးရဲ့ မှေးနကေို့လညြး ” Happy birthday! မမေေ သကရြှညကြနြွးမာစိတြ ခမြွးသာ လိုရာဆနျဒပှညြ့ပါစေ ” ဆိုပှီး ဆုတောငြးစကားလေးပှောခဲ့ပါသေးတယြ။ Happy Birthday ပါ အနတြီရေ သကရြှညကြနြွးမာပှီး ဖှစခြငြွ သမွှဆနျဒတိုငြး အကောငအြထညြ ဖောနြိုငပြါစလေို့ ဆုတောငြးပေးပါတယြ။